आज फेरी ह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य, सुन घटेका बेला किन्ने की ? – Gazabkonews
आज फेरी ह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य, सुन घटेका बेला किन्ने की ?
काठमाडौं– नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य ९ सय रुपैयाँले घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सुन आज प्रतितोला ९ सयले घटेसँगै आज प्रतितोला ९४ हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
यसअघि हिजो प्रतितोला ९४ हजार ९ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। यस्तै तेजाबी सुनको प्रतितोला ९३ हजार ५ सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको महासंघले जनाएको छ । त्यस्तै आज चाँदी प्रतितोला १ हजार २ सय ६५ रुपैयाँ कारोबार भएको महासंघले जनाएको छ।
भारतीय मिडिया छाइन् नायिका विपना थापा, यसरी खुशीसाथ भारतीय पति र छोरासँग हाँशी खुशी बिताइरहेकी छिन् जिन्दगी, नेपाल आउने र फिल्म खेल्ने विषयमा दिइन् यस्तो प्रतिक्रिया
हिरा काजीको कमालको काम, ‘मैंले रुँदा आँशु पुछ्थ्यौ, हाँस्दा सँगै हाँस्थ्यौ’को सर्वत्र चर्चा, तपाई पो भिडियो हेर्न छुटाउनुभयोकी ?
काठमाडौं । गायिका अञ्जु पन्तको स्वर रहेको ‘मैंले रुँदा आँशु पुछ्थ्यौ, हाँस्दा सँगै हाँस्थ्यौ’ बोलको गीतको म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक भए लगत्तै सर्वत्र चर्चा सुरु भएको छ । यो समाचार तयार पार्दासम्म भिडियोलाई १ लाख ३३ हजार बढीले हेरेका छन् ।
गीतकार हिराकाजी थापाका शब्दमा बरिष्ठ गायक तथा संगीतकार नागेन्द्र श्रेष्ठको सुमधुर संगीत शृजना रहेको गीतमा चाँद सिंगको एरेन्ज रहेको छ ।
लोकप्रिय अभिनेता आकाश श्रेष्ठ, समिक्षा पोखरेल, आलिसा बास्तोला, प्रबिन डिसी, आरध्य खड्का, तपस अधिकारीको अभिनय रहेको गीतको भिडियो काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न रमणीय स्थलहरुमा छायांकन गरिएको भिडियो निर्देशन बेलायतमा नै बसेर गीतकार हिरा काजी स्वयमले नै गरेका हुन् ।
मायालुलाई मन दिएपछि मायालु बेइमान हुँदा एउटा प्रेमीको जीवनमा कस्तो असर पुग्छ, प्रेमी घरको न घाटको बन्न पुगेको प्रेम वियोगान्त विषयलाई कलात्मक तरिकाले देखाइएको छ ।
गौरव गिरीको कोरियोग्राफी रहेको गीतको भिडियोको छायांकन उत्तम हुमागाईले गरेका हुन् भने सम्पादन अनिल रानाले गरेका हुन् ।